Wararka Maanta: Axad, Aug 19, 2018-Madaxweynaha Masar oo saxiixay sharci lagu xakamaynayo Internet-ka
Xukuumadda dalkaasi ayaa sheegtay in tallaabooyiinkan looga gol leeyahay in lagu xaliyo xasilooni darada iyo argagixisada.
Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay dowladda in ay isku dayayso in ay aamusiiso dadka siyaasad ahaan ka soo horjeeda.
Sharciga cusub ayaa ka dhigan in bogagga internet-ka laga xiro karo gudaha waddanka kuwaasi oo xukuumada Masar ay u aragto inay abuurayaan wax halis ku ah amniga qaranka.
Qof walbba oo lagu helo inuu qeyb ka yahay bogagga Internet-ka ama uu booqdo ayaa wajihi doono xabsi ama ganaax.
Ka hor xitaa inta aanan la ansixinin sharcigan cusub, kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in in ka badan 500 oo bog durbaba la xiray.
Sidoo kale waxaa jiro hindise sharciyeed kale oo baarlamaanka uu meelmariyay bishii la soo dhaafay, balse wali uusan ansixinin madaxweyne Sisi, kaasi oo fasaxaya in cinwakasta oo baraha bulshada ah oo ay ku tixan yihiin inka badan shan kun oo qof la kormeero.
Iyada oo dhammaan dibadbaxyada wadooyinka lagu dhigo la mamnuucay, ayaa internet-ka waxaa uu ahaa madasha keliya ee dadka Masar ay haysteen si ay fikradahooda ugu soo bandhigaan.